Inkqubo yoLawulo lwePropathi yeSizwe SINAP-Geofumadas
NgoDisemba, 2016 Okufumaneka, Geospatial - GIS, egeomates My, UkuCwangciswa kweziThili
Inkqubo yoLawulo lwePropathi kaZwelonke (i-SINAP) liqonga lobuchwephesha elidibanisa lonke ulwazi olunxulumene nezixhobo zomzimba kunye nezolawulo lwesizwe, apho abalinganiswa abahlukeneyo bakarhulumente kunye nabucala kunye nabantu babhala yonke imicimbi enxulumene nempahla yepropathi. ipropathi, eyimfuneko kumgaqo-siseko kunye noshintsho lwentengiso yemasheya.
Umfanekiso ngakwesokudla uza kuwubona kwindawo ethile, yinto yokukhwela ngelinye ilanga ndiyenzile ngexesha lam elithile malunga LADM, kwenye yeemiboniso e-Amsterdam, kukho i2012.
I-SINAP yazalwa yaza yaphunyezwa eHonduras kwisithuba sika-2002 ukuya ku-2005, ngaphakathi kwesakhelo seNkqubo yoLawulo loMhlaba, efanayo naleyo ibisenzeka ngaxeshanye kumazwe aliqela phantsi kwenkxaso yemali yeBhanki yeHlabathi. Ayizalwanga njengokhuthazo lwangaphandle, isiseko sayo sikwiithiyori zakudala ezixhasa iimodeli zophuhliso, apho zikhokelela kuphuhliso lweemarike, kwelinye icala, ukuncipha kwiindleko zokuvelisan (izinto eziluhlaza, izibonelelo zabantu, iteknoloji kunye nenkunzi) nangakolunye uhlangothi ukwehla kwiindleko zokuthengiselana. Yiyo loo nto, unikwe ubunzima bokunciphisa iindleko zokuvelisa kwilizwe elisaphuhlayo, eyona nto iphambili kwi-SINAP ukunciphisa iindleko kunye namaxesha.
SINAP ayikho sisixhobo computer, kodwa imigaqo-nkqubo kuquka uphuhliso lobugcisa, ukuhlanganiswa nxaxheba zeziko ababandakanyekayo kulawulo lomhlaba kunye lula iinkqubo ezisekelwe kwizinto ezenzeka ngamazwe kwimigangatho nokwamkelwa kubuchwepheshe ulwazi noqhagamshelwano.
Xa i-SINAP icacisiwe, kukho ukucaca okwaneleyo kokusebenzisa kuphela itekhnoloji, ngaphandle kokuguqula imigaqo kunye neziko, phantse kufana nokubeka amavili kwihashe, endaweni yoyilo lwesithuthi esitsha. Ke isicwangciso-buchule sikhatshwa lutshintsho olukhulu olubandakanya ukuyilwa kwemithetho emitsha efana noMthetho wePropati (Property Law) noMthetho woLawulo loMhlaba; Ngaphantsi kwesi sikhokelo sezomthetho, iZiko lePropati liyilelwe, elidibanisa iRejista yePropathi (eyayiyinkundla ePhakamileyo yezoBulungisa), iNational Cadastre (eyayiliCandelo loLawulo elixhomekeke kwi-Ofisi kaMongameli) kunye ne-National Geographic Institute ( oko kuxhomekeke kwiCandelo loMphathiswa Wezemisebenzi Yoluntu Nezothutho).
Iziko elitsha iCandelo of Records, iCandelo of Cadastre kunye neJografi kunye nedilesi Regularization phantsi woqondo swi Outsourcing ngu Associated Centres ezinokunika oomasipala okanye amaqumrhu phantsi yobehlulelani bukarhulumente nabezoshishino labucala.
ISINAP izalwe phantsi kweModeli yeCadastre Domain Model (CCDM), umqulu owawunjalo i-abastracto ka-Christiaan Lemmen kunye nezinye ii-geofumadas ezazifuna ukubonakala kwindlela yeCadastre 2014.
Le CCDM e 2012 waba LADM (ISO-19152), kodwa ngelo xesha (2002) wayesele yokucinga ngokwaneleyo oqolileyo zisebenza njani izinto kulawulo lizwe ungenziwa lula ukuba nolwalamano elula yomthetho, Yokuziphatha noXanduva (RRR ) phakathi bachaphazelekayo (Party) kunye nezinto yobhaliso (BAUnits), kunye nelizwe njengoko ulwalamano lwendawo izinto kunye nemephu njengezinto yomthetho karhulumente echaphazela umthetho zabucala.
Olu luyilo loyilo lwe-SINAP kunyaka we-2004; ngothotho nodes emide ngelo xesha uyayenza: SINIMUN koomasipala, INTUR kwicandelo lezokhenketho, SINIA Environment, SNGR ngenxa ulawulo lomngcipheko, CIEF zamahlathi INFOAGRO kwicandelo lezolimo.
I-logo esekunene yile bendinokuyila kwakhona ngo-2012, ndijongise ukuba yeyiphi esele ikho. Ngomqondo oshwankathelwe, i-SINAP liqonga elidibanisa ubuncinci iinkqubo ezine eziphambili:
Inkqubo Yobumbano yeeRekhodi.
Le nkqubo ibandakanya, phakathi kwezinye iirekhodi, ipropathi yokwenyani kunye necadastral registry njengenyaniso efanayo. Kuthetha ukuba iipasile zecadastral zenza ukutshayelwa ngokupheleleyo komhlaba, zombini iipropathi zabucala ezinxulunyaniswe neefama ezibhaliswe phantsi kwenkqubo yokwenene, kunye nepropathi kawonkewonke njengezitrato kunye nemilambo enxulunyaniswa nephepha lolawulo. Ukongeza, iipasile zibonakalisa njengempembelelo enqamleza indlela ye-cartography enxulunyaniswa nomthetho woluntu, kunye nemimandla yezikhukula, iindawo ezikhuselweyo, amaziko embali, njl.
IQINISO ayiquki nje kuphela i-real estate; kuluhlu lwe-agnostic ukuhlanganiswa ngokuthe ngqo kwimpahla eyahlukeneyo yesizwe; okwangoku kubandakanya ukuthengisa, ubugcisa kunye nempahla ye-vehicular.
Inkqubo yeNational Territorial Information (ISINIT)
Le nkqubo ibhalisa kwaye ipapashe yonke ingcaciso yemifanekiso eveliswe ngamaziko ahlukeneyo elizweni kwaye yenze iinkonzo ezongezwe ngexabiso ezenza ukuba zifumaneke kubasebenzisi abaphantsi kwenkqubo efanayo yokuqikelela. Ukongeza, ibhengeza ulwazi ngendawo, izalisekisa indima yokugcina ulwazi ukunqanda ukulahleka kolwazi oluveliswe ngamaziko oluntu kunye nokusebenza njengendawo yokupapashwa kwabo bangenazo izibonelelo eziyimfuneko zokuhambisa ulwazi abalwenzileyo.
Ukubhaliswa kwemiGaqo yokuSebenza koMhlaba (RENOT)
Le irejista edibanisa yonke imimiselo equlathe iimpawu zempembelelo okanye izibonelelo ekusetyenzisweni, kwisizinda okanye kwindawo yeziza. Imvelaphi yale rejista inxulunyaniswa noMthetho woMmiselo weNdawo, efuna ukuba izicwangciso zommiselo kunye nemithetho yomyalelo woluntu eveliswe ngamaziko ahlukeneyo inokunyanzeliswa kwaye ibonakaliswe njengempembelelo kwiipasile kuthethwano okanye isatifikethi se-cadastral, ukulawulwa kweenkqubo okanye izatifikethi kwiipropathi zoBhaliso lwePropathi.
Nangona i-godadors ye-RENOT iguqukile ngamaxesha ahlukeneyo, ingcinga yabo ihlala ifana yokuba iimephu ezipeyinti kufuneka zibophe: «Kumele kubekho iimeko zomthetho ezixhobisa imigaqo-nkqubo yokuvuma, okhethekileyo, intengiso kunye nobhaliso, ukuze imigaqo yomyalelo woluntu ibonakaliswa kwiimpahla zabucala »
I-National Spatial Data Infrastructure (INDES)
Ewe, ayizizo zonke izinto ezazilula ukuzalisekisa. Ngo-2002 umba woLwakhiwo lweziSeko zeDatha yendawo wawungowokuqala, ubuncinci kula mazwe apho amandla eziko kunye nokunikezelwa kwezifundo kwiiyunivesithi kunokunikezela okuncinci. Ngelo xesha, inkqubo yesine yayibizwa ngokuba yiClearinghouse, igama elisibhozo elisikhumbuza ngee-metadata zokukhangela ezidumileyo. Kunyaka ekufuneka ndiyamkele kwakhona, siyibiza ngokuba sisiXhobo seSizwe soLwazi lweeNdawo (INDES).
Ngaba bekufanelekile umzamo we-SINAP?
I-SINAP ibonakalisiwe kwiimeko ezahlukeneyo zamanye amazwe, nangona ngokoluvo lwam, ayinababhali abanqwenela ukuxelela ngezibonelelo zayo phantsi kwendlela yokuthand 'izwe. Ngomsi ozelwe ekuqaleni, kwitafile yeglasi kunye neekomityi ezimbalwa zekofu, kwilizwe elinengxaki yorhwaphilizo kunye nokuxhaswa kwezopolitiko okufana namazwe amaninzi anemixholo ye-Hispanic, i-SINAP yiprojekthi engumzekelo kwiinkalo ezininzi. Kwezi nkqubo zincinci zine, uQINISEKISO yayilelona lalinemiqathango efanelekileyo yokuzinza, kuba uphuhliso lwalo lwenziwa ngexesha lokurekhodwa njengabaxhasi balo ababonakalayo kwaye ngenxa yokuba babheja ekusebenziseni gwenxa amanqanaba amaninzi okuphembelela umthetho omtsha notshintsho lweziko, Yintoni engekho lula (okanye engacetyiswayo) yokwenza kulo naliphi na ilizwe; Nangona oku kuye kwafuneka baxhume imiqobo enjengokungachukumisi ikhowudi yoluntu (yeyiphi na kwezi ntsuku eya kudlula kumthetho oyilwayo), kunye neziganeko ezinqongopheleyo kwikhondo leCadastre-Registry, nangona ibifakiwe kwiingcali eziqinisekisiweyo.
Njengoko ukukhula kwamaziko kukho imingeni emininzi ukususela kumaziko emva projekthi, ukunqongophala umsebenzi waseburhulumenteni kunye nabasebenzi ngena kungabonwa union kuye kwakhokelela phantse ukuba sibutyake zihlandlo uzukileyo le Institute Property; Noko ke, njengokuba platform ubuchwepheshe intlonelo QINISEKA ukuba eye wavumela ukuba aqhubeke oshishina kwiqonga olusemthethweni emfaneleyo.
Iprojekti yamahhala yeso sihlandlo ayibonakalwanga ngokuvuthwa kokuvuthwa, ngoko bekufuneka ukuba isebenzise iteknoloji enkulu yokuthengisa, ukunika umzekelo:
Mapping lwedijithali imishini iphuhliswe VBA, ekubeni ngamayelenqe log omkhulukazi ngeWeb zembali DGN V8 esinolawulo zokuhlola-Checkout usebenzisa ProjectWise
Ngombukeli wewebhu kwi-ActiveX, abasebenzisi boomasipala baceliwe ukuthengiselana kwemisebenzi ngokusebenzisa i-DGN ngokukhawuleza, i-GeoWeb Publisher and Web-explorer lite.
Isizukulwana sesatifikethi se-cadastral singenziwa kumxhasi we-Microstation Geographics, ukuvelisa imephu, idatha yedatha kunye nekhodi yekhosi ngokukhetha ukhiye we-cadastral; ngelixa i-intanethi ingaveliswa usebenzisa i-GeoWeb Publisher, ngokwayo okanye ngokukhawuleza, ivelise iifayile zePDI eziqulethe idatha yeefayili kunye negraphic.
Ukukhangela kunye nokukhishwa kweencwadi zokubhalisa kwenziwa ngezicelo ezizenzekelayo eziphendulela lo msebenzi olukhuni kwinkqubo ye-maquila, eyakhishwa kamva kwiinkampani zangasese.
Iqonga lokuthengiselana lefayili ye-cadastral kunye ne folio yangempela yaveliswa ngokupheleleyo kwiwebhu.
Mhlawumbi ukusetyenziswa kwabo bonke obu buchwephesha, bonke abo basebenzisi kunye nelo nqanaba lokuzenzekelayo balifumana ibhaso le-BeAwards ngo-2004 (namhlanje iBeInspired), kwicandelo lolawulo lokusingqongileyo nango-2005 kwicandelo likaRhulumente. Kodwa uvavanyo lweasidi kuxa ngo-2006 kwafuneka ajongane notshintsho kwezopolitiko nelinye iqela kunye nawo onke amaqhinga emveli okuxhasa ezopolitiko kunye nomnqweno wokucima yonke into kwaye aqale kwasekuqaleni.
Ngenye intsasa beza ne diski yangaphandle (eyayiyinto engekhoyo ngelo xesha), besithi bazakugcina i-Unified Registry System kuloo diski ... bayeka ukuyibuza xa beqonda ukuba baya kufuna idiski zangaphandle ezininzi.
Ngenye intsasa, umntu othile wacela ulawulo lomsebenzisi womlawuli wedatha. Emva kweentsuku ezimbini wayelibele iphasiwedi, kwaye kwakuyimfuneko rhoqo kwiintsuku ezintathu ukuqala isiseko sedatha emva kokulungiswa okuzenzekelayo ezinzulwini zobusuku, kuba ngelo xesha kwakungekho ukusebenza kweseva kwaye replica yayihlala isebenza ngelixa backup phakathi kwe-12 ebusuku kunye ne-6 kusasa.
Ubhaliso olusetyenzisile inkqubo luqale ukukhalaza, kwaye le nkwenkwe yaqonda ukuba iNkqubo yayingaphezulu kwimizobo emihle yokumisela i-PowerPoint Presentations.
Ngokuqinisekileyo, kwiimpazamo ezenziweyo, kukho izifundo eziluncedo ngakumbi eza kusetyenziswa ngabasebenzisi abohlukeneyo abaye bathatha inxaxheba kwinqanaba lokuqonda, uyilo, uphuhliso, amaxwebhu, ukumiliselwa nokwenziwa kwamaziko. Xa inkqubo iyila, kwaye abantu bangabathathi-nxaxheba, amathuba emva kwala mava atshintsha ubomi babo, ngaphaya kolwazi olufunyenweyo.
Yintoni engenakwaliwa malunga nokuzibophelela kukaHonduras, nge-SINAP, kukuba ekuhambeni kwexesha, umbono wokuqala awutshintshanga. Inkqubo ikwazile ukusinda kumaxesha amathathu orhulumente, kubandakanya nokubhukuqa umbuso (2009); Ngeli xesha bekukho onke amathuba okusilela, kodwa ukusetyenziswa komgaqo wokuqonda kubalulekile «Ukuba uya kwenza inkqubo enkulu, yenza ukuba usebenze ngokukhawuleza«; xa befuna ukubuyela ekusebenziseni iincwadi, kwa abo basebenzisi bakukhusela. Okwangoku, izithili zobhaliso ezili-16 kwezingama-24, esele zisebenza kule nkqubo, zenziwe zala maxesha. Kwi-2013 isicwangciso sendaleko senziwa ukuba sifudukele kwiqonga elitsha yonke le misebenzi yehlisiweyo, ukufaka isoftware evulelekileyo ukuphucula uzinzo, kunye nohlengahlengiso kwimodeli yeshishini ukuyilungiselela ukudityaniswa komnini wabucala, nokwamkelwa Umgangatho we-LADM kunye Ubuchwepheshe beBlockChain ukulungiselela ukugcinwa kwedatha. Enye yezinto eziphambili ezazibandakanyiwe yayiziiphakheji database, ezenziwa ukusuka kubangela, ukuze ukuba iJometri entsha ibhaliswe ngonxibelelwano oluqhelekileyo (njengendawo entsha ekhuselweyo), zonke iipasile zecadastre zichaphazeleka ngokuzenzekelayo kwaye zibonakala njengezilumkiso kwiifama zobhaliso; Iitekhnoloji ezivulekileyo zemithombo yolwazi ezinje ngeOpenLayers, iGeoServer kunye neGeoNetwork zaye zabandakanywa ukufaka iGeoWeb Publisher kunye neBentleyMap endaweni yeMicrostation Geographics; Oomasipala, iinkonzo zewebhu zaphuhliswa ukuze zisebenzisane nge-WFS kwiplagi yeQGIS.
Kulo mfanekiso olandelayo ndiyifake indlela yokuhamba ye-SINAP, efuna ukunqoba ezi zibini Imibiko yeCadastre ye-2014 ezingekoyiswa: ukuba amacandelo abucala nawoluntu asebenze kunye, nto leyo ekhokelela kwisindululo sokungakhathali somanyano lukarhulumente nolwabucala kunye nokuxhaphaza okukhulu kobukrelekrele beshishini obuvumela ukuba iindleko zibenakho ukubuyiswa ngokupheleleyo.
Phantsi kombono omtsha, iinkqubo ze-SINIT kunye ne-RENOT aziseyomfuneko njengeenkqubo ezongezelelweyo, njengoko kucetyisiwe kuthintelo lwetekhnoloji kunye nokugwetywa kwamandla ngo-2004. I-SINIT yenye yeerejista enye ye-SURE (iRegistry yeCartographic) kunye neRENOT iRegistry yesiqhelo; inkqubo entsha isaphuhliswa; Umzobo ongezantsi ubonakalisa ezinye zezixhobo zetekhnoloji.
Ukuba izinto ziyaqhubeka ngokwesantya esikhoyo, i-SINAP iya kuba nakho ukufeza indawo yayo eyayikho kwasekuqaleni phantsi komgaqo waMaziko aManyeneyo; ukuba yiRegistry kunye neCadastre kuphela kumaziko olawulo ngaphakathi kwe- inkqubo ephakathi iqhutywe phantsi kwesikimu se-Front-back office.
Ke ngoko, oomasipala banoxanduva lokuhlaziywa kwe-cadastral kunye nokunikezelwa kweenkonzo ezinxulumene nothintelo; Okwangoku, oomasipala abaliqela bayenza phantsi kweskimu sokudluliselwa kwabasebenzi, ukuthengiselana ngempahla mboleko esele isebenza ngokuchanekileyo ziibhanki ezithile, ezinje ngeeofisi zecala, njengoko kubhaliswa yiRegantile Registry, eqhutywa yiChamber of Commerce kunye nomgqatswa ukwenza okungaphezulu koko ...
Ngokuqinisekileyo ubuthathaka obukhulu be-SINAP buya kuba lixesha elide, ukunqongophala kweembongi ezithetha ngobuchule bazo kwinqanaba lokuqonda, lobuchwephesha kunye netekhnoloji. Usizi, kuthathelwa ingqalelo ukuba mhlawumbi iflegi yokuqala ebonakalayo ye-LADM, ngaphambi kokuba ibe ngumgangatho (CCDM); Ukufaneleka kwamanye amazwe anjengeColombia, apho olu hlobo lobuqaqawuli lungayekiyo ukuthatha ithuba kwaye lufakwe kumgaqo-nkqubo woluntu, njengoko kubonisiwe I3859.
Izifundo ezifundwe kwi-SINAP ubuncinci zi-8, kwaye zibaluleke kakhulu ... ukuba yinxalenye yaloo msi kubalulekile. Kuya kubakho ixesha lokuthetha ngayo, ukuphela kovuyo lonyaka ka-2016.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Allplan: 4 2017 ezithembisa isiqalo esitsha
Post Next Iinkqubo zeBentley -I-SIEMENS: isicwangciso esenzelwe i-Intanethi yezintoOkulandelayo »
2 Iimpendulo "kwiNkqubo yeSizwe yoLawulo lwePropati SINAP"
Kulungile, ingxelo entsha, leyo isephantsi kophuhliso, ibandakanya iinkonzo ukuze abasebenzisi basebenzise, ​​bahlaziye kwaye babhengeze ulwazi kulawulo lwendawo. Omnye umzekelo onjalo yi-SIT kaMasipala, apho oomasipala bangenza ugcino lwe-cadastral kwimodyuli yeCadastre, kodwa ikwabandakanya imodyuli yocwangciso lwendawo apho banokuthi badibanise khona izicwangciso zabo zocwangciso.
Francisco Puga uthi:
Eyoyikisayo Andikwazi ukucinga ukuba kunzima ukwenza iprojekthi efanayo. Ngaba uye wacinga ukuba unokubonisana nolwazi ngeAPIs? Oku kuya kwenza ukuba amanye ama-agents, afana nee-NGOs asebenze ngokucwangcisa indawo ezweni, ukudibanisa imisebenzi yabo ngendlela elula kunye ne-cadastre kazwelonke.